Ihe omumu abuo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nchịkọta: efere nke abụọ
Nri anụ ezi nri na garlic na ginger
Nri anụ ezi nri na-achọ ndidi. Ogologo oge ka a na-eri anụ ahụ, ọ ga-esi na ya pụta. Ke adianade do, anụ ezi na ọkpụkpụ dị iche iche juiciness na utịp impeccable. Egwu ndị dị mma dị mma na ...
Nri nke Ukraine: anụ benderiki - uzommeputa
Ihe na 17.11.2018 17.11.2018
A na-esitekarị na Britiks na mpaghara ebe ọdịda anyanwụ Ukraine. N'ezie, ndị a bụ pancakes na anụ na-ejuputa. Ma ọ bụghị ọdịnala - na-apụta, ma tụgharịa n'akụkụ triangles. Na-ejuputa maka Benderik kemmiri ihe na ...
Christmas toki stuffed na anụ ezi, imeju na sausages - a ibu uzommeputa!
Tebụl Afọ Ọhụrụ gị ga-adị ka akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụrụ na ị na-etinye turkey na ya. Nnukwu, na-atọ ụtọ, na-edozi ahụ ma dị ezigbo ụtọ! Maka na 7-8 servings, ngwaahịa ndị dị mkpa: 1 bụ nnukwu turkey ...
Chicken na cheese bọọlụ
Ịkụ ọkụ dị ụtọ na-amasị gị? Kedu nke ga-eme ka uto nke efere ahụ kwado, mee ka ọ dịkwuo iche? Mgbe ahụ, uzommeputa anyị maka ọkụkọ na bọọlụ bọọlụ ga-adịrị gị! Na-eri nri ezinụlọ na e ghere eghe ọkụkọ na a maara garnish ...
Ntugharị Portuguese: Ntụziaka nke Riz na White Beans na Lingual Soseji
Achịcha ndị Portuguese anaghị ekwe omume n'echiche na-enweghị ntụziaka na agwa. E nwere otu puku na otu uzommeputa maka ntụ ọka, salads, efere ndị dị n'akụkụ mgbagwoju anya. A na-ejikọta ụdị agwa dị iche iche na azụ na anụ. A na-esi na ya nweta Sandwiches, poteto ndị a na-egwupụta na ya na ọbụna ihe ndị e ji eme ihe maka ihe ụtọ dị ụtọ. Ghọta ụzọ nchịkọta zuru ezu, efere nke nri Portuguese - ọcha agwa na soseji. A na-ewere efere dị ka ihe ejiji dị iche iche. Nye ya, hichaa ọkwá anụ ezi na-esi ísì ụtọ na ose, paprika na ose. Na Portugal, a na-akpọ ụdị sousaji lingui'a. Kama, ị nwere ike iji anụ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ọbụna na-ese anwụrụ. Efrata maka ntụziaka Portuguese maka agwa: ite sie agwa agwa; Nnyeòhèrè Xnumx; 200 maka karọt, garlic na yabasị; ụyọkọ pasili ọhụrụ; Nka osikapa Xnumx. Nri nri Ọ bụrụ na ị na-eji akọrọ nkụ maka uzommeputa, nkwadebe ga-adịru otu ụbọchị dum. Ị ga-etinye ya na obere oge maka 1 awa, wee sie nri ogologo oge. Ma, ị nwere ike iji nri mkpọ - ite nke sie agwa ga-azọpụta ọtụtụ oge. Isi ihe bụ na agwa ndị dị na ite ahụ dị na agwa, ma ọ bụghị gbarie n'ime porridge. A na-edozi efere site na mmalite ruo n'isi na otu ite. Ghee eyịm na carrots na sriisi slices (na nri Mediterranean, mmanụ olive na-eji maka frying). Tinye osikapa na Ị nwere ike ịgbanye mmiri mmiri ma ọ bụ esi efere. Nwuo, gbụ ma tinye agwa. Njikere iji chọpụta osikapa osikapa Gwakọta na pasili pasili tupu ije ozi. Ọzọkwa ...
kedu esi esi kpoo nduku na ngwa ngwa ngwa nri?
kedu esi esi kpoo nduku na ngwa ngwa ngwa nri? Iji ghee poteto na ngwa ngwa na-esi nri, ịkwesịrị iji usoro ịme achịcha ma ọ bụ Frying. Oge nkwadebe nke nduku na-adabere na ike nke ihe nlereanya na nha nke poteto osisi. ...
Esi amịpụta akụkụ ahụ anụ ezi n’okpuru flaps ma ọ bụ n’akụkụ ya ka a na-akpọ ya na abụba ya na akwa anụ.
Kedu ka esi ghota abdominal akụkụ nke anụ ezi podcherevok ma ọ bụ flank ọ na-akpọ na abụba na n'ígwé nke anụ m na-atụ aro ka esi nri podcherchevok. Wunye nnu 4st na akụkụ dị n'ime abụba ahụ. spoons na 1kg na uhie ...
Kedu esi esi esi nri inine aldente?
Etu esi esi nri aldente? Anaghị m esi nri ruo mgbe m siri nri, mgbe ahụ, amaghị m banyere itinye mmiri ice n'okpuru mmiri oyi. M na-esi nri dị ka ndị a - m bee nnukwu zukini ma ọ bụ zukini ...
Esi esi esi osikapa ma obu millet porridge na mmiri ara ehi? Enwere ezi ntụziaka ọ bụla a gbalịrị ime?
Esi esi esi osikapa ma obu millet porridge na mmiri ara ehi? Enwere ezi ntụziaka ọ bụla a gbalịrị ime? Mgbe m na-atụ egwu iko na spoons ọ na-apụta na ọ dị njọ, m nọ na anya na na uto na dum ...
Enwere m ike ighe nduku na pickled mushrooms ma ọ bụ pickled?
Enwere m ike ighe nduku na pickled mushrooms ma ọ bụ pickled? Ị nwere ike ighe otu nduku, rie ya salted na pickled mushrooms (ịkwesighi ighe ha) ighe poteto na pickled mushrooms ...
Kedu ka esi kwado ọka bali ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma?
Kedu ka esi kwado ọka bali ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma? Sunye ọka ọṅụṅụ n'ime ite ma tinye ya n'okpuru mmiri mmiri dị nwayọọ, nwuo ruo mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-asa ákwà niile (nke a bụ ntụ ọka ahụ e guzobere n'oge njem nke ọka ọṅụṅụ ...
Kedu oge iji mee ka anụ ọkụkọ sie?
Kedu oge iji mee ka anụ ọkụkọ sie? Ma, ezigbo uzommeputa) Bee eyịm n'ime yiri mgbaaka, ighe, gbakwunye karọt nke atọ, ighe maka ntakịrị ihe. Mgbe ahụ, zipu ose na akwụkwọ nri ma ọzọ ...
kedu ka ị si eme gravy maka akwụkwọ nri?
kedu ka ị si eme gravy maka nri ose? My karọt bụ akụkụ nke ndochi (eyịm, kara sauteed, obere osi nri osikapa, minced anụ - naanị ịgbanwe agba wee ghọọ ...
esi esi esi anụ anụ
esi esi nri mpi mpi Okpokoro mpi, ighe anu ogwu na anwisi na mbadamba tomato, i nwere ike ijikota anu ndi ahu na mpi ha, ma i nwere ike tinye anu na ozo ...
Kedu ihe mgbochi bara uru?
kedu uru uru olu bara ?? Dị ka nri mmiri niile, ha bụ akpa ndị nwere protein na ihe ndị na-ewu ewu. mussel nile bụ mollus. Anụ anụ karịrị ihe niile dị n'ime glycogen bara uru maka ahụ mmadụ ...
Esi esi esi nri pilaf? ka osikapa mebiri.
Esi esi esi nri pilaf? ka osikapa mebiri. enweghi mmiri dị mkpa, na n'oge isi nri mkpuchi adịghị emeghe ma ọ bụ gbochie ya na pilaf. Ana m ọkara awa na anyanwụ mmiri osikapa ...
Kedu esi esi osi osikapa? ya mere ọ na-acha odo odo? anụrụ ya na turmeric ma ọ bụ ihe ọ dị mkpa ka agbakwunye ya?
Kedu esi esi osi osikapa? ya mere ọ na-acha odo odo? anụrụ ya na turmeric ma ọ bụ ihe ọ dị mkpa ka agbakwunye ya? Naanị saffron nwere ike inye ma agba na ekpomeekpo. Turmeric ga-agba agba, ma ọ bụghị ụtọ ahụ ...
Kedu ihe nnu mara mma?
Gịnị bụ amịrị amịrị amịkpọ?! Nke a bụ ezigbo mabụl http://www.kamentorg.ru/ M na-adụ gị ọdụ ka ị chọọ ma họrọ ihe maka onwe gị ebe ahụ ... beef nwere abụba dị mkpa. Nke a bụ anụ dị iche iche na -eme ka abụba ...
Esi esi esi nri obi, umeji na ngụgụ? anụ ezi
Esi esi esi nri obi, umeji na ngụgụ? anụ ezi Have nwetalala EGGS nri? Ha na-ekwu ụtọ))) N’eziokwu, amaghị m esi esi esi nri ndị dị otú ahụ.)) Eziokwu ka mma, igbutu…
Kedu esi eme ka azụ azụ si azụ azụ?
Kedu esi eme ka azụ azụ si azụ azụ? O nweghị ihe dị otú ahụ. Ụlọ ahịa na-eri nri bụ mgbe enweghị ego ọ bụla. Ma ntakịrị azụ na-agba agba 2 na anụ grinder, tinye ngwa nri, wdg.
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,359.